4 Koorsooyinka Tababarka Microsoft iyo Shahaadada - Waxbarashada ITS
1. Tababarka sare ee Microsoft Excel 2013
2. Microsoft Active Directory oo lakulmayo server-yada 2012R2
3. Hordhaca Xafiiska Microsoft 365
Xafiiska 365 ee IT Pros
Laga bilaabo Xafiiska 365
Isgaarsiinta Adeegga 365
Xafiiska Isbedelka 365
4. Soo bandhigida iyo qabanqaabinta Microsoft SCOM 2012
Koorsada Waxbarashada sare ee Microsoft Excel 2013 waxaa loogu talagalay inay fahmaan si ay u qaataan qaababka muhiimka ah si ay u isticmaalaan miisaska wareega, dib-u-eegida iyo kala-soocida macluumaadka shaqada, isticmaalka qalabyada macluumaadka, la shaqeynta dadka kale, iyo sameynta iyo kormeerka makrurrada.
Koorsadan waxaa loogu talagalay fahamyada leh kuwa dhexe ee awoodda wadada ee leh Microsoft Excel 2013 kuwaas oo u baahan in la qaato waxyaabo badan oo isdaba-joog ah ama fahfaahinimo kuwaas oo u baahan in ay qaataan mawduucyada ku xusan koorsada koorsada 2013.
Ka dib marka la dhammeeyo kooraskan, fahamku waxay yeelan doonaan awoodda:
Samee miisaska iyo jaantusyada.
Raac jadwalka tixraaca iyo qaybaha.
Beddel mowduucyada iyo ansixinta iyo xoojinta macluumaadka.
La socosho dad kale adigoo hubinaya xaashida shaqada iyo buug gacmeedka.
Samee, Isticmaal, beddel, iyo kormeerida makrurrada.
Macluumaadka soo dejinta iyo qiimaha.
Hel Hands on the guide iyo ka shaqeeyaan kontoroolka Horumarinta Active Directory ee Windows Server 2012 iyo Windows Server 2012 R2 at this 5-day ee Microsoft Shahaadada rasmiga ah. Waxaad qaadan doontaa qaabka aad u kantaroolayso si aad u sii fiicnaansho oo aad u hubiso macluumaadka helitaanka iyo xogta, abaabulida ururada iyo maamulka astaamahaaga astaamaha, iyo si aad u hesho macluumaad badan oo ammaan ah. Waxaad baran doontaa sida loo diyaariyo qayb ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee ku yaal Active Directory, tusaale ahaan, Adeegyada Diiwaanka Ururada Diiwaanka Active Directory (AD DS), Siyaasadda Kooxda, Xakamaynta Hawlgalka (DAC), Waraaqaha Shaqada, Shaqada Guud, Adeegyada Shahaadada, Maareynta Xuquuqda Adeegyada (RMS), Adeegyada Federaalka, iyo weliba iskudubaridaada adigoon ku soo bandhigi laheyn bay'ad cusub oo cusub, sida Tusaha Windows Azure Active Directory. Iyada oo ah wajiga koowaad ee asaasiga waxbarashada, waxaad samayn doontaa waxqabadyo gacmeed ku jira jawiga sheybaarka.
Koorsadani waxaa laga filayaa xirfadlayaasha Macluumaadka (IT) Xirfadlayaasha leh Active Directory Domain Services (AD DS) kulan oo waxay raadinayaan koorso keli ah oo sii kordhin doonta barashada iyo kartida isticmaalka cusub ee Macluumaadka iyo Macluumaadka Ilaalinta ee Windows Server 2012 iyo Windows Server 2012 R2. Tani waxay sida caadiga ah ku jiri doontaa:
Xayeysiinta DS Administrators kuwaas oo rajeynaya in ay intaa ka dib abuuraan macquul ah ee Horumarinta Macluumaadka iyo Macluumaadka Ilaalahan ee dhowaan la leh Windows Server 2012 iyo Windows Server 2012 R2.
Qaab-dhismeedka ama guddoomiyeyaasha Infrastructure oo leh waayo-aragnimada guud ee AD DS iyo macluumaadka u muuqda in ay balaarinayaan aqoontaas aasaasiga ah oo si ballaaran u baranaysa gogol-xaaridda Ururada Hawl-galka ee Active Directory ee Windows Server 2012 iyo Windows Server 2012 R2.
IT Xirfadayaasha oo qaatay 10967A: Mabaadii'da Koorsada Kumbuyuutarka ee Windows Server oo rajeynaya in ay ballaariso macluumaadka diiwaangelinta firfircoon.
Inay fahmaan xalka la gaari karo ee maamulka khaaska ah oo leh karti ay wax uga qabtaan xaaladaha xalalka ku habboon.
Soo jiid oo adi nidaamka AD DS ee Windows Server 2012.
Saabsan AD DS diri.
Ku dhaqan meelo AD DS ah, qabanqaabiyaan oo kormeeraan tarjamada
Hantida iyo kormeerka Siyaasadda Kooxda
Ku dhaji goobaha macmiilka ee siyaasadda kooxda
Hirgelinta awoodda shahaadada awoodda (CA) ee AD CS iyo sida loo kormeero CAs.
Baadi, cabiraan, kormeeraan cadeynta.
Raac oo kormeer AD RMS.
Fulinta oo nidaamiya AD FS.
Macluumaadka sirta ah iyo qorshaha ah ayaa loo adeegsadaa isticmaalka horumarinta, tusaale ahaan, Xakamaynta Hawlgalka Baaxadda, Foomka Shaqada iyo Goobta Shaqada
Baaritaan, baaritaan iyo aasaasida iskuduwidda ganacsiga AD AD adreesyada.
Actualize Directory Windows Azure Active.
Ku oogista iyo hagaajinta Adeegyada Nidaamyada Khariidadaha Khafiifka ah (AD LDS).
Xafiiska 365 Aasaaska wuxuu eegayaa dhismayaasha dhismayaasha ee Xafiiska 365 iyo qaybta soo koreysa ee xirfadlayaasha IT. Microsoft Office 365 waa isku-darka maamul-hoosaadka iyo codsiyada karti-dhaqameed ee ugu dambeeyay. Koorsadani waxay bilaabmaysaa iyadoo la falanqeynayo mashiinka 365 ee ka soo jeeda qorshaha IT Professional, ka dibna wuxuu fahamsan yahay iyada oo la marinayo Xafiiska 365 oo dhameystiraya isbeddelka codsiyada iyo maamulka.
Xafiiska 365 wuxuu qeexayaa awooda macmiilayaasha codsanaya inta ay u oggolaanayaan IT inay sii wado xakamaynta. Noqoshada sida ay u dhici karto, isbeddelkani wuxuu u baahan yahay IT-ga sidii loo hagaajin lahaa awooddooda adeegga macaamiisha caadiga ah ee xilliga xisaabinta loo qaybiyey. Habkan, IT-ga wuxuu dareemayaa sida qaybaha cusub ay u yimaadaan Xafiiska 365 si ay u bilawdaan, u ogaadaan aaladaha cusub iyo hababka loo wareejiyo dhismooyinka dhismaha ee Xafiiska 365, iyo qorshaha qaybta cusub ee hawlgalka IT-ga.
Xafiiska 365 waxaa lagama maarmaan u ah aqoon-isweydaarsiyada waxbarasho ee khibradaha IT-da ee xarumaha xarumaha Xafiiska 365 kaas oo xoojiya dhaqaalaha miisaanka iyo fulinta kartida.
Mawduucyada xisaabaadka ee xiisaha Microsoft ee loo soo diray u diritaanka Xafiiska 365. Gaadiidka maamulka daruuriga ah maahan sida urur samafal oo macaamiisha caadiga ah oo fidiya oo u baahan awood iyo habab cusub. Xafiiska 365, xafiisyada IT waxay si deg-deg ah kor ugu qaadi karaan oo ay la socon karaan tijaabo si ay u jiheystaan ​​jaangooyooyinka habka saxda ah ee awoodaha. Raadi nidaamka dirista, qalabyada iyo hawlaha loo isticmaalo si loo hagaajiyo bilowga Xafiiska 365.
Xafiiskan 365 wuxuu udubdhexaadiyaa qodobbada fadhiga ee xiisaha iyo fursadaha ayagoo sii kordhinaya degaanka Xafiiska 365 oo tijaabineysa habka jiilka.
Kulankan wuxuu xoogga saarayaa xajmiga adeegga Xafiiska 365. Iyadoo si ku meel gaar ah loo isticmaali karo macaashka habka la isku xiro, hirgelinta wadiiqooyinka waraaqaha u dhexeeya khabiirada IT iyo kooxda 365 waa aasaas. Muujiyaan sida Xafiiska Office 365 wax ka bedelka, dib-u-habeynta, taageerada loo fidiyo, iyo samaqabka maamulka loo gudbiyo iyo sida loola xiriiro Microsoft.
Xafiiska 365 waxaa lagama maarmaan u ah kulanka tababarka wuxuu muujinayaa sida Microsoft uu u kobcinayo casriyeynta iyo sida loola socdo isbeddelada maamulka 365 iyo codsiyada ku yaal agagaarkaaga.
Casharkan shan-maalmood ah wuxuu fahamsan yahay barashada iyo waxqabad si loo soo saaro lana naqshadeeyo Maamulaha Xarunta Hawlaha 2012. Intaas waxaa sii dheer fasalkan ayaa dejin doona fahamka ah ee la xariirta kaabayaasha Hawlgalka Hawlaha 2012.
Koorsadan waxaa loogu talagalay khabiirada IT-ga oo leh aasaaska Windows Server, Active Directory iyo nidaamka dejinta iyo kulanka maamulka.
Ka dib markaad dhameysatid kooraskan, fahamku wuxuu yeelan doonaa awoodda:
Muuji Maamulaha Hawlaha 2012 iyo qabanqaabinta aduunka oo idil iyo maareynta Server gaar ah.
Isticmaal Hoolalka Khayraadka ee helitaanka sare.
Raadi Maamulaha Hawlaha Maamulaha iyo Konsole Webka.
Samee aasaaska kombiyuutarka iyo kumbuyuutarka labadaba kormeerka qaababka kormeerka.
Xayeysiinta maamulka iyo iibsashada.
Diyaargaro Xeerarka, Dhacdooyinka, Maareyeyaasha iyo Hawlaha.
Diyaarso Warbixinta oo sameyso warbixinno.
Isticmaalida xarumaha shaashadaha iyo kambiyuutarada isticmaalaya kormeerka Agentless iyo Monitoring Agentless Exception.
Diyaarso iyo kormeerka Adeegyada Dakhliga Xisaabinta.
Samee Transaction Transactions.
Samee Codsiyada Kala Duwan.
Guri badan oo khabiir ah.
U diyaari server-ka Gateway si aad u ilaaliso xaaladaha aan la aaminsanayn.
Diyaarso waraaqaha u dhexeeya rucubyada maamulka.
Maamulaha Hawlgallada 2007 ka u gudub maamulaha hawlaha 2012.
Barnaamijka 'Drone Program' oo dhamaaday